Diyaaraddi Pakistan ee burburtay: 'Waxaan arkayey dab qabsadayy diyaaradda'
Saturday May 23, 2020 - 09:25:55 in Wararka by Burco Staf
Mid ka mid ah dadki shilka diyaaradeed ee ka dhacay magaalada Karachi ee dalka Pakistan ka badbaaday oo ka warramay sida uu shilka u dhacay ayaa sheegay inuu arkayey oo keli ah 'diyaaradda oo uu dab qabsaday'.
Hay'adaha caafimaadka ee ku sugan gobolka Sindh waxay sheegeen iney shilkaasi diyaaradeed ku dhinteen 97 qof.
Balse mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda duulimaadyada Pakistan waxay wakaaladda wararka ee Reuters u shegeen iney dhici karto iney diyaaradda cillad dhinaca degitaanka ah ay la kulantay.
Mulkiilaha Leicester City oo shil diyaaradeed galay
Haweenay qayb ka leh shirkad diyaaradeed oo shil diyaaradeed ku dhimatay
Diyaarad la sameeyay dagaalkii labaad ee adduunka oo soo dhacday
"Cidna kuma fakarin iney diyaaraddu burbureyso; diyaaradduna xawaara aad u hooseeya ayay ku socotay maadaamaa ay soo caga dhiganeysay" ayuu yiri.
Wuxuu sheegay inuu shilka kaddib uu miir daboolmay, wuxuuna yiri: "Waxaan dhinac walba ka maqlayey qaylo, qaylada carruur iyo dad waaweynba. Waxaan arkay dab diyaaradda qabsaday. Dadkina waan arki waayey waxaanna maqlayey qayla oo keli ah".
"Waxaan iska furay suunka, waxaanna arkay iftiin yar, waxaanna u dhaqaaqay dhinaca aan iftiinka ka arkay. Waxaanna damcay inaan diyaaradda oo dhulka u jirtay 3 mitir aan ka boodo si aan lafaheyga u badbaadiyo," ayuu yiri.
Shilka diyaaradeed maxaa sababay?
Maxamed Cuzeyr oo shilkaasi goob joog u ahaa oo BBC u warramay ayaa sheegay inuu maqlay qarax aad u weyn kaddibna gurigiisa uu dibadda uga soo baxay. "Waxaana shilkaasi gabi ahaanba ku burburay afar guri oo ay diyaaradda ku soo dul dhcday, waxaana is qabsaday qaac iyo holac shilka ka dhashay," ayuu yiri.
"Guriyaha shilka ku burburayna deris ayaanu ahayn oo igama fogeyn, marka idiinma sheegi sida ay dhacadadaasi oo naxdin badneyd."
Maxaynu ka ognahay khasaaraha shilkaasi ka dhashay?
Image captionDadka diyaaradda sarnaa badankood ayaa waxay ahaayeen dadka munaasabadda ciidda u socday
Ra'isal wasaaraha Pakistan wuxuu sheegay "shilka inuu ahaa mid naxdin iyo aragagax leh", isaga oo amar ku bixiyeey in baaritan degdeg ah la sameeyo.
Waa sidee xaaladda ammaan ee diyaaradaha Pakistan?
Dalka Pakistan ayaa wuxuu horay u diiwaan geliyey shilal diyaaradeed oo dhowr ah.
2010-kii diyaarad ay lahayd shirkadda diyaaradaha Airblue oo meel ku dhow Islamabad ku burburtay waxaa ku dhintay 152 oo diyaaraddaasi saarneyd, tiradaasi oo noqoneysa tii ugu badneyd oo ay ku dhintaan shil diyaaradeed oo Pakistan ka dhaca.
2012-kii diyaarad Boeing 737-200 oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Bhoja oo burburtay waxaa ku dhintay 121 qof.
2016-kina, diyaarad ay lahayd shirkadda diyaaradaha caalamiga ee Pakistan oo waqooyiga Islamabad ku burburtay waxaa ku geeriyooday 47 qof.